बुलेटप्रुफ रोग निरोधक क्षमताका लागि यी आठ प्रकारका खानेकुरा नियमित प्रयोग गर्नुहोस् ~ FMS News Info
बुलेटप्रुफ रोग निरोधक क्षमताका लागि यी आठ प्रकारका खानेकुरा नियमित प्रयोग गर्नुहोस्
हामीले नियमित रुपमा आफ्ना पाठकहरुलाई सके सम्म उचित सुचना प्रसारण गरेर उनीहरुमा स्वस्थ जीवन तथा खुशियाली ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामी प्रत्येक दिन मानव स्वास्थलाई कसरी तन्दु्रस्त राख्न सकिन्छ भन्ने सत्य र तथ्यमा आधिरित सुचना प्रसारणका लागि कटिबद्ध छौं ।
धेरै जस्तो अवस्थामा हामीले विज्ञहरुबाट प्राप्त गरेका तथ्य र सत्य जानकारी पस्किने गरेका छौं । यसका लागि हामी आफ्ना विज्ञहरु प्रति सधै आभारी छौं र आफ्ना पाठकहरुलाई पनि हामीले पस्केको जानकारी पढेर आफुले स्वास्थ लाभ गर्न सफल हुनु भएकोमा धेरै खुशी छौं ।
कतिपय अवस्थामा तपाईलाई रुघाखोकीले सताइ रहेको हुन्छ र त्यसबाट छुटकारा पाउन तपाई आफ्नो रोग निरोधक क्षमतामा सुधार ल्याउन चाहिरहेको हुन सक्छ । उचित भिटामीन र मिनरल आबद्ध खोराक नियमित रुपमा प्रयोग गर्ने गरेमा तपाईले आफ्नो स्वास्थ तन्दु्रस्त रहेको पाउनुहुनेछ ।
अन्य रोगबेथा लगायत यो शक्तिशाली मेथड अपनाउनाले साधारण रुघाखोकी लगायत अन्य शारीरिक बेथाहरु तपाई छेउ कहिल्यै पर्ने छैन ।
तसर्थ आज हामी तपाईहरुलाई रोग निरोधक क्षमतामा अपुट विकाश गर्नका लागि यी प्राक्रितिक र भरपर्दो सरदाम प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थलाई तन्द्रुस्त पार्नहुन सल्लाह दिदै छौं ।
यी ८ प्रकारका खानेकुराले इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाउन मद्धत पुर्याउँछ
१. भेडे खुर्सानी
यसमा भीटामिन सी को मात्रा अन्य फलफुलमा भन्दा दुई गुणा बढी मात्रामा हुन्छ । यसका साथै भेडे खोर्सानी बेटा क्यारोटिनको प्रमुख स्रोतको रुपमा लिइन्छ जुन छालालाई स्वस्थ बनाउनुका साथै आखालाई पनि राम्रो गर्छ ।
२. कागती तथा सुन्तला
यी फलमा भीटामीन सी पाइन्छ । यसको प्रयोग गर्नाले सेतो रक्त कोशिकामा संक्रमण हुन पाउँदैन ।
अदुवामा भीटामीन सी को मात्रा पनि भएकाले यसको सेवन गर्नाले रुघाखोकीले आक्रमण गर्न सक्तैन । अदुवामा जिन्जेरोल भन्ने तत्व पाइन्छ जसका कारण अदुवा पीरो र तातो पनि हुन्छ । अनि यो तत्वमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अत्यधिक मात्रामा हुन्छ ।
यसको सेवन गर्नाले जोर्नी दर्दमा अत्यधिक फाइदा मिल्ने कुरा हालै गरिएको एक अनुसन्धानबाट पुष्टी भैसकेको छ । ज्वरो आएको बेलामा बेसार पानी उमालेर सेवन गर्नाले रोगबाट छुटकारा पाइन्छ ।
यसमा भीटामिन सी, बेटा कारोटीन र विषाणु नासकको मात्रा अत्यधिक मात्रामा आवद्ध हुन्छ जसले तपाईको रोग सँग लड्न सक्ने क्षमतालाई सदैब बलियो बनाइ राख्छ । सक्नुहुन्छ भने पालंगोको सागलाई थोरैमात्र पकाएर अथवा झ्वाईक मात्र पारेर खानाले अझै फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ भए सम्म र पाए सम्म दैनिक रुपमा पालुंगोको साथ प्रयोग गर्नुहोस् ।
पालुंगो जस्तै ब्रोकाउलीलाई पनि सब्जीहरुको राजाको रुपमा लिने गरिएको छ । यसमा पनि विषादी नाशक गुण र भिटामीनको मात्रा अत्यधिक मात्रामा आबद्ध रहन्छ । यसमा भीटामिन ए, सी र इ हुने भएकाले यसको सेवन गर्न अति आवश्यक छ । पालंगो जस्तै ब्रोकाउलीलाई पनि थोरै समय सम्म मात्र पकाउनुहोस् नत्र यसमा भएको पोषण तत्व हराएर जान्छ ।
यदि तपाई दहीको प्रशंसक हुनुहुन्छ र दही तपाईलाई मन पर्ने खोराक मध्य पर्छ भने तपाईको निम्ती यो सुखद समाचार हो । हालै गरिएको एक अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान कर्ताहरुले दही सेवन गर्नाले मानिसको रोग सँग लड्ने क्षमता बलियो हुने पत्तो लगाएका छन् । यसमा भिटामीन डी को मात्रा यथेस्ट मात्रामा पाइने भएकोले यसले इम्युन सिस्टम बिलियो बनाउँछ ।
बदाममा भिटामीन इ पाइन्छ । अनि भिटामीन इ ले शरीरमा जम्मा भएको बोसोलाई सजिलै पगाल्ने काम गर्छ । दैनिक रुपमा बदामका केही गेडाहरु खाने गर्नाले शरीरमा अनावश्यक रुपमा बोसोले घर बनाउन पाउँदैन ।